War-Degdega: Madaxweyne Axmed Silaanyo Wakaalad Cusub Aas-aasay, Magacaabayna Laba Masuul Akhri | Warsugan News
Home Wararka War-Degdega: Madaxweyne Axmed Silaanyo Wakaalad Cusub Aas-aasay, Magacaabayna Laba Masuul Akhri
War-Degdega: Madaxweyne Axmed Silaanyo Wakaalad Cusub Aas-aasay, Magacaabayna Laba Masuul Akhri
WAR-SAXAAFADEED: 08/06/2017-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Axmed Maxamed Silaanyo, waxa uu xeer Madaxweyne oo summadeedu tahay JSL/M/XERM/249-4859/062017 uu ku aas-aasay dhismaha wakaaladda horumarinta xabkaha iyo faleenka ee Jamhuuriyadda Somaliland, kuna magacaabay Maareeye iyo Maareeye ku xigeenka Wakaaladda Xabkaha iyo Faleenka.
Markuu Arkay:	In khayraadka dabiiciga ah ee xabkaha iyo faleenka dalku kaalin mug leh ka qaadan karto horumarinta dhaqaalaha dalka;
1)	Waxa halkan lagu Aasaasay Wakaaladda Horumarinta Khayraadka Xabkaha iyo Faleenka oo yeelanaysa jiritaan qaanuuni ah, isla markaana u madax-bannaan hawleheeda shaqo iyo maaliyadeed, iyada oo u gudanaysa xilkeeda si waafaqsan dastuurka, xeerarka iyo siyaasadaha dalka.
2)	Wakaaladda Horumarinta Xabkaha iyo Faleenku waxay hoos tagi doontaa Wasaaradda Ganacsiga iyo Maalgashiga Caalamiga ah oo ku yeelan doonta awoodaha ay ka mid yihiin:
a)	Kormeerka iyo dabagalka sida: Helidda war-bixinnada shaqada, maaliyadda, iyo u gudbinta Xukuumadda Dhexe odoraska sannad-miisaaniyadeedka Wakaaladda, ka dib marka ay masuuliyiinta Wakaaladdu u soo gudbiso.
b)	Ka taakulaynta Wakaaladda diyaarinta qorshayaasha, siyaasadaha iyo kor u qaadidda xirfadaha iyo aqoonta hawl-wadeennada Wakaaladda.
1)	Dhaqan-gelinta siyaasadaha iyo mashaariicda horumarineed ee Xukuumadda ee lagu horumarinayo khayraadka xabkaha iyo faleenka dalka.
2)	Dejinta qorshayaasha iyo halbeegyada shaqo ee Wakaaladda, si waafaqsan qorshaha iyo barnaamijyada guud ee Xukuumadda.
3)	Dejinta qorshayaal iyo cilmi-baadhis lagama maarmaan u ah horumarinta iyo ka faa’iidaysiga khayraadka dabiiciga ah ee xabkaha iyo faleenka dalka, iyada oo loo eegayo horumarinta xaga wax soo saarka, ka ganacsiga iyo suuq-gaynta.
4)	Ku dhiiri-gelinta beeralayda iyo iskaashatooyinka wax soo saarka iyo horumarinta xabkaha iyo faleenka oo ku dhisan nidaam casriyeysan.
5)	Dhismaha iyo abaabulka iskaashatooyinka ka ganacsiga khayraadka xabkaha iyo faleenka.
6)	Ka hawl-gelidda iyo abuuridda suuqyada ganacsiga xabkaha iyo faleenka ee dalka gudihiisa iyo dibeddiisaba.
7)	Diyaarinta iyo u soo bandhigidda Xukuumadda qorshayaasha horumarinta ganacsiga xabkaha iyo faleenka dalka.
8)	Diyaarinta iyo fulinta tallaabo kasta oo kale oo looga gol-leeyahay xaqiijinta ka faa’iidaysiga xabkaha, si loo hir-geliyo loona gaadho hiigsiga Xukuumadda ee koboca dhaqaalaha dalka.
9)	Fulinta hawlaha kale ee Xeerka Dhismaha Wakaaladda iyo Xeerarka kale ee khuseeya ee awoodda siinaya Wakaaladda.
1)	Wakaaladdu waxay yeelanaysaa Maareeye iyo Maareeye Ku-xigeen uu magacaabo Madaxweynuhu, ka dib marka uu la tashado Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Maalgashiga Caalamiga ah.
2)	Qaab-dhismeedka iyo Awoodaha Wakaaladda, Xilka iyo Waajibaadka Maareeyaha, Maareeye Ku-xigeenka Wakaaladda iyo waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka u ah, waxa lagu faah-faahin doonaa Xeerka Dhismaha Wakaaladda, si waafaqsan Qodobka 122aad ee Dastuurka iyo Qodobbada 64aad illaa 68aad ee Xeerka Kala Xadaynta Nidaamka Xukuumadda iyo Hay’adaha Madaxa Bannaan ee Xeer Lr. 71/2015.
Markuu Tixgeliyey:	Ahmiyadda ay Wakaaladda Xabkaha iyo Faleenku ee Jamhuuriyadda Somaliland u leedahay dhismaha iyo horumarinta Qaranka;
Markuu Arkay:	In baahi loo qabo magacaabidda jagada Maareeyaha iyo Maareeye ku xigeenka Wakaaladda Xabkaha iyo Faleenka ee Jamhuuriyadda Somaliland;
Previous articleBurco: Guddoomiyaha KULMIYE oo Taakulo Lacageed oo Dhan $70,000 ku Wareejiyey Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda oo 270 kartoon oo dawooyin kayd ah ku wareejisay bahda Caafimaadka Togdheer + weftiga oo booqday cusbitaalka iyo xabsiga Burco + Sawiro
Next articleMid Ka Mida Baabuurtii Waddani Ugu Tallo Galay In Ay U Isticmaalaan Ololaha Doorashada Oo Shalay Ku Dhex Cadilmay Caasimada Hargeysa Iyadoo Derewalkiina Ka Lugeeyey